Kukhona ezinye izici ezithinta zofuzo, iminyaka yobudala, amahomoni, kwamaphutha ukudla, ngaphezulu, kodwa ukulungiselela efanele yokudla ingenye izinto ezimbalwa ubengenakwenza ukulawula isimo izinwele. Phela, uma beyizidlova ehlambulula kubo, ubungeke ufuna ukwenza isakhiwo nakakhulu, izingilazi ukudla okungalungile, akunjalo?
Ukudla ukudla enothe, ungakwazi nomthelela ukushuba izinwele zakho, ukukhula kwabo ngisho ematfuba ukuqhakaza.
1. uwoyela Almond
uwoyela Almond iqukethe semali izakhi, kuhlanganise amaprotheni, amafutha enempilo kanye amavithamini athile ukuthi zihlobene izinwele impilo. Okuqukethwe vitamin E e nati, lapho abacwaningi wathi, ikakhulukazi kuthinta kwabantu babo futhi isicwebezelisi.
Kolunye ucwaningo izinyanga ezingu-zamadoda wanezela nsuku zonke vitamin E ekudleni aye anda izinwele ukukhula by kakhulu ngendlela 42%. Vele isipuni alimondi inikeza cishe izingxenye ezimbili kwezintathu we RDA for Vitamin E. fat-encibilikayo
inzuzo Mandarins liqukethe izinto ezimbili: ezingeni lelisetulu Vitamin C, okuyinto kusiza ukumuncwa yensimbi umzimba, futhi vitamin B 12, ekhuthaza izinwele ukukhula, zokunciphisa ukulahlekelwa kwabo futhi retards inqubo yokuqhuma.
ugqumugqumu Indian izithelo omuncu. Inani layo itholakala Antioxidants. Ubizwa ebekwe odokotela Ayurvedic ngoba isikhumba nezinwele bukhanye. Indlela elula ukuthenga amajikijolo abandayo, eneqhwa kubo, uthathe yizicucu amancane, bese ufaka kuya cocktail.
Ukungabi wamaminerali yokuthi izinwele uwela out. Spinach kuyinto okunothe futhi iqukethe sebum, okuyinto ethatha njengoba zemvelo hair conditioner. Leaf umzimba oluhlaza futhi inikeza i-omega-3 acid, i-magnesium, i-potassium, calcium nokusansimbi.
5. ngesiGreki yogurt
yogurt ngesiGreki Kuyinto uvithamini B 5, ekhuthaza igazi ligeleze isikhumba sasekhanda nezinwele ukukhula.
"Omega-3 has nomphumela eqeda ukuvuvukala. Kungasiza uma une ukuvuvukala esibangela nezinwele ", - uthi wesikhumba uJakobe. Le into kuqukethwe imikhiqizo yemvelo efana salmon, sardine ne mackerel. Omega-3 kuqinisa izinwele futhi kwenza kube shiny futhi obukhulu. Salmon - a ukudla asiza umzimba ukuba inqubo insulini ngokushesha.
Lo mkhiqizo ngcono kwegazi legazi, eletha umoya-mpilo nezakhi ukuze izinwele zakho follicle. Fafaza lokhu spice okumnandi ku ubhontshisi noma uyengeze ikhofi lakho noma cereal.
Oats abacebile yensimbi, fibre, zinc, kubalulekile fatty acid kanye omega-3 polyunsaturated okunamafutha acid (PUFAs), okuyinto zishukumisa izinwele zikhula zibheke ngakhona. Lokhu kwenza kwabo amafutha futhi unempilo.
U-vitamin C kuvimbela izinwele fragility nasekubhujisweni. Ku-double-izimpumputhe, cwaningo placebo-elawulwa, olwanyatheliswa kuyi-Journal of Clinical Tebuciko Awezesikhumba, abacwaningi ihlolwe ibhekwa temlomo equkethe vitamin C abesifazane ne thinning izinwele. Zathola ukuthi i-okufakiwe kunomthelela "kakhulu ukukhula kwawo ngo-nenkinga efanayo abesifazane." Nakuba sasivame sicabange orange liwumthombo ongcono vitamin C, kwelinye iphakethe ukwatapheya kunomthelela omkhulu.
Amaqanda aqukethe uvithamini B, ngokuthi biotin. Kuyasiza izinwele zikhula futhi kuqinise izinzipho ziyaqothuka. Ukungabi zonke saleli vithamini kungaholela nezinwele. Eminye imithombo ezinhle biotin - alimondi, ukwatapheya salmon.
Nesitshulu ephelele wamaprotheni, okusansimbi, i-zinc, i-folic acid kanye biotin. Umtimba udzinga folic acid ukubuyisela impilo kwamangqamuzana egazi abomvu ukuthi banikeze ekhanda futhi izinwele ligcwele umoya-mpilo.
Zinc kuyinto amaminerali abalulekile esekela empilweni yomuntu. Uma ugula umzimba wakho akwanele kwalesi sakhi, ungathola nezinwele ngisho eyelashes. Ungathola amasheya ocebile zinc e yenkomo, lobster futhi ibaleka.
Njengoba sekushiwo, yensimbi ukuntula kungabangela nezinwele, ikakhulukazi abesifazane. Iron igcwele isipinashi, usoya nodali. Isibindi angabukeka kancane mnandi, kodwa uma uthanda pate ke izinwele zakho ngeke bazuze kuphela. Isibindi kuyinto okunothe.
Phawula indlela imisipha yakho abhashe, futhi ngezinye izikhathi ngisho encishisiwe lapho ungatholi amaprotheni ngokwanele. Into efanayo ingenzeka nezinwele zakho. Ngaphandle ngokwanele wezokudla amaprotheni izinwele, eqinisweni, aqale ashaye, futhi umuntu ehlelwa ukulahlekelwa ingqikithi izinwele. Kunconywa ukukufaka ekudleni inkukhu, inhlanzi, yenkomo iphilile noma yengulube loin.
Vitamin E is a antioxidant enamandla ukuthi empeleni akwazi ukuncela ezilimaza UV ukukhanya ukuvikela amangqamuzana esikhumba. Iphinde sivuselela isikhumba ezilimele of the sezinwele. Ibhali - iwumthombo omuhle ka-vitamin E.
16 no-17 Nuts imbewu
Pistachios usizo ukulwa wesilisa pattern impandla, njengoba equkethe biotin, futhi walnuts aqukethe amafutha ukuthi ungeze ku izinwele zakho mithambo ine-elastin. Kuvikela izinwele kusukela zokugwema ukuphuka.
18. I ubhatata
Beta-carotene zivikela ezomile, izinwele buthuntu futhi kuvusa nezindlala we ekhanda, ezizosiza ukukhiqizwa uwoyela ketshezi, ngokuthi sebum. izithelo Orange nemifino kulokhu kuyoba lesikahle. Kunconywa ukukufaka ekudleni isanqante, ithanga, ibhece, umango kanye ubhatata.
Kanye yensimbi omunye amaminerali esihle sokulondoloza bucwebezele izinwele zakho kuba magnesium. I-turbot njengoba ezinye izinhlobo zezinhlanzi, iqukethe amazinga aphezulu magnesium.
20. Amakhowe okuthiwa ama- shiitake
Ngokocwaningo olwenziwa ngo-2012, ithusi ezingabasiza ukuba bagcine umbala engokwemvelo izinwele. Amakhowe okuthiwa ama- shiitake abacebile amaminerali, kanye izimila zasolwandle Sesame imbewu.
Pea iqukethe emakamu eliphezulu vitamin B 9. Omunye piala lo mkhiqizo iqukethe 1,114 microgram B 9 futhi cishe kathathu RDA - micrograms 400.
Nakuba lamanani aphezulu kakhulu zethusi atholakala isibindi lwesilwane ezahlukene, senani enkulu ayithola Spirulina. Lona uhlobo ulwelwe oluluhlaza bukhule ngokwemvelo olwandle nosawoti emachibini endaweni sezulu nakwezifudumele.
Lombhalo ucashunwe ebhukwini imvubelo iyafana resin futhi iphunga othize abukhali. Ngokwe-USDA, kuba umholi phakathi kwawo wonke ukudla acid okuqukethwe folic. Inani elincane ithebula umusi, mayelana 4 amagremu, equkethe 100 mcg ka-folic acid noma 25% of the Kunconywa lemali nsuku zonke.
24. iklabishi bok choy
Dermatologists abatadisha inkinga nezinwele, ukubheka amazinga ferritin egazini. Ngakho bangakwazi ukunquma izinga lezakhi zensimbi emzimbeni wakho. Uma udle okuningi iklabishi bok choy, okuyinto okunothe, kungenzeka ngabe waphawula ushintsho ezingeni ferritin.
Amazinga aphezulu mercury kungabangela nezinwele. Ngokuvamile wukuthi emikhulu ubukhulu izinhlanzi, ayanda amazinga mercury kuwo. Masihlukane izinhlanzi ezifana swordfish noma yenhlanzi.
Esinye isizathu ukuthi ekudleni iba lesikahle. Lokhu Sweetener yokufakelwa, aspartame, icuphe nezinwele.
Amaphrotheni ibaluleke kakhulu izinwele futhi kuvimbela ukumuncwa yayo ushukela. Masihlukane nokudla okune amanani okusezingeni eliphezulu ushukela.
28. Imikhiqizo ezenziwe ngofulawa mhlophe
Isinkwa esimhlophe, amakhekhe, pasta nezinye elicwengisiswe isitashi kusetshenzwe iguqulwe ibe ushukela, okuholela thinning izinwele. Ngakho ayeke croissant udle wonke kakolweni uma kungenzeka.
Utshwala behlisa izinga zinc emzimbeni wakho, okuyinto i amaminerali abalulekile ngoba impilo izinwele futhi ikhule. Iphinde dehydrates izinwele zakho, abenze ziyaqothuka ngaphezulu.
30. Fast Food
Okunamafutha ukudla ukwenza isikhumba sakho oily. Njengoba ikhule ezimbotsheni akho avimbekile, ungaqala nezinwele.
Ngiyithola kanjani ukuvota "BK"?
Kangakanani isimungumungwane e abadala?
Indlela ukukhetha ukudla umdlwane: ukubuyekezwa, amathiphu Kennel
Impilo aquarium yakho, aquarium umquba
Chery Tiggo FL 2013 - imodeli ebuyekeziwe Chinese imoto umkhakha
Lezinyawo izicathulo "Nike" - lula futhi kalula
Imibala emangalisayo - periwinkle ezincane nezinkulu